Home Wararka Nin Soomaali ah oo lagu dilay dalka Maraykanka
Nin Soomaali ah oo lagu dilay dalka Maraykanka
Waxaa halay Magaalada Moorhead ee Gobolka Minnesota lagu dilay Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Allaha u naxariistee Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi oo ahaa tagsiile. Ciidanka Booliska Moorhead ayaa xaqiijiyay dilka loo geystay Marxuum Cabdullaahi Maxamed, waxaana dilkaas loo qabtay Willie Sparkman oo ah 18-jir, wuxuuna ku eedeysanyahay dillka darajada labaad oo ah mid aan ula kac aheyn.
Ninka dilak gaystay ayaa qurshihiisa kowaadd waxaa uu ahaa inuu dhac iyo baarasho u geysto marxuumka oo ahaa 24-jir sida ay sheegeen Booliska Magaalada Moorhead ee Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Booliska ayaa sidoo kale sheegay in ay eedeysane Sparman ku raad-joogeen kakor inta aanu dilin C/llaahi, maadaama uu dhac ka geysta laba goobood oo kala duwan labadii habeen ee la soo dhaafay.
Allaha u Naxariistee Marxuun C/llaahi Maxamed ayaa noqonaya Soomaaligii labaad oo muddo toban cishe gudahood ah lagu dilay gobolka Minnesota, waxaana todobaadkii hore ay tuugo hubeysan ku dhex toogteenn xawaaladda Taaj ee xaafadda Cedar ee magaalada Minneapolis wiil la dhihi jiray Liibaan Cusman Baqarre.